Kuyahlekisa ngamazambane. Umncintiswano Wezithombe ZaseBrithani - I-Potato System Magazine
"Ukuphela kokuhlukaniswa." URay Spence
I-Photocrowd, isiza sabathwebuli bezithombe, sifingqe imiphumela yomncintiswano wokuqala wePotato Photograph of the Year, ukubamba iqhaza lapho kwakudingeka khona "ukuveza amazambane ngobuciko bokubuka izithombe," kubhala uTJournal.
Owinile kwakunguRay Spence, owathwebula isithombo sebhotela lamazambane elihluma lisikiwe. Owokugcina uthole ikhamera yeFujifilm XA-7, unyaka wobulungu enhlanganweni yezithombe yaseBrithani iRoyal Photographic Society, umhlangano wokuhlela umhleli womncintiswano uBenedict Brian kanye neminyaka emithathu yokubhalisela Photocrowd.
Ukufaka isicelo somncintiswano, bekufanele ukhokhe ama-euro ayisihlanu. Yonke iminikelo iye kuTrussell Trust, enikeza ukudla kwabampofu e-UK.
Tags: Великобританияukuncintisana kwezithombe zamazambane
Inkampani "Melagro" yathutha amathani ayizinkulungwane ezingama-5,5 amazambane eYurophu ngonyaka owedlule